Mali: Dibad-baxayaal Qudha Ka Jaray Taliye Boolis. -
Mali: Dibad-baxayaal Qudha Ka Jaray Taliye Boolis.
Taliye boolis ayaa laguu dilay gobolka Ségou ee bartamaha dalka Mali kadib markii dad bananbax dhigayay ay qudha ka jareen, sida ay masuuliyiintu xaqiijiyeen.
Issiaka Tounkara, oo ahaa madaxa booliska magaalada Niono, ayaa dhintay khamiistii, kadibmarkii dibadbaxayaashu ay gubeen saldhigga booliiska ay ku hor mudaharaadayeen, waqti ay hore u codsadeen in uu iscasilo.
“Dad fara badan oo ku hubaysan ayaa weeraray shaqaalahii saldhiga, iyagoo bililiqaystay xarunta kadibna dab sudhay” ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda amniga.
Askarta booliiska ah ayaa rasaas kor u riday si ay dadka mudaharaadaya u kala cayriyaan,wayse fashilantay dadaalkaasi, halqof oo kamid ah mudaharaadayaasha ayaana halkaasku dhintay ayay masuuliyiintu yidhaaheen.
Dibadbaxayaasha ayaa dhinacooda uga sheegay warbaahinta inay ka cadhoodeen taliyaha gobolkooda lagu soo celiyay oo ay hore u codsadeen in laga badalo ama uu is casilo, iyaga oo ku eedeeyay inuu ahaa mid xidhiidh la leh budhcada, musuqna ku caan ahaa
Ciidamada Somaliland Oo Gurigiisa Kala Baxay Wariyihii Sadexaad Ee Shabakada Hadhwanaag News.